ရေကျော်ပွဲဈေး သွားခဲ့တဲ့ ယဉ် လတ်ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်များ – XB Media Myanmar
ရေကျော်ပွဲဈေး သွားခဲ့တဲ့ ယဉ် လတ်ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်များ
အက်ရှင်မင်းသမီးလေးလို့ လူသိများတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လတ် ဟာဆို ရင် သရုပ်ဆောင် ပီပြင်ပြီးကျရာ ဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် သူမကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေး ရဲ့ချစ် ပရိသတ်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ် ရဲ့ ရေကျော်ပွဲဈေး သွားခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေ ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယဉ်လတ်က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများကိုလည်း ရိုက်ကူးထားသူပါ။ သူမသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဂျင်ပါတီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကလည်း ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ယဉ်လတ် က ရေကျော်ပွဲဈေးကို သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ
ယဉ်လတ်က ” ရဘူး . . . ကလေး ကိုယ်တိုင်ခြစ်ပေးမှာ .ရေခဲခြစ် ကို . Khalayy 💙ကလေး ရေကျော်ပွဲဈေး ရောက်ခဲ့စဉ် . စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဓါတ်ဖမ်း‌ရင်းကလေးလိုက်ထိန်း‌ပေးရှာတဲ့ အစ်ကိုတော် အစ်မတော်များ နဲ့ စားချင်တာတွေဝယ်ကျွေးပြီး အိမ်ထိပြန်လိုက်ပို့ပေးပါသော မမခိုင် ရယ် . . .သမီးတော်ကို ရေကျော်ခွင့်ပေးခဲ့ပါသော ‌သမီး #ဖေဖေမေမေ နှင့်တကွ #ပျော်အောင်ထားပေးကြပါသော ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကို ကျေးကျေးအများကြီးတင်ပါ၏ .
😁 Hee…အရမ်းပျော်ခဲ့ရပါတယ်လို့ ကျေးဇူးပါလို့မချိန်းထားပဲတွေ့တဲ့သူများ ရေ . . . အဲ့ဒါ ရေစက်ဗျ . . .ပျော်လို့ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားနေတာလေးတော့ သည်းခံ . . .😅 ကလေးဆိုတော့ အဲ့လိုပဲ 😅😂🤣 ” ဆိုပြီး သူမ ရဲ့ ပွဲဈေးမှ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ယဉ်လတ် ရဲ့ ရေကျော်ပွဲဈေး သွားခဲ့တုန်းက ပုံရိပ်လေးကို ဆက်လက်ကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော်။
သူများဆော့နေတဲ့အနားသွားပြီး ရုပ်ကလေးက ချစ်လိုက်တာ
သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ် ရဲ့ ရေကျော်ပွဲဈေး သွားခဲ့တုန်းက ပုံရိပ်လေးကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်နော်။
Photo;KoGyii YeKaung Khant ,Referenc& Credit:momolay.com
ပဲခူးမြို့က ရွှေနန်းတော်ပွဲကြီးကို လှပေ ကျာ့ရှင်းတဲ့ အနီရဲရဲဝတ်စုံလေးနဲ့ ပွဲ တက် ခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး